Chautari Daily » ह्वात्तै बढ्यो विदेशी मुद्राको भाउ : हेर्नुहोस् कुन देशको कति ?
ह्वात्तै बढ्यो विदेशी मुद्राको भाउ : हेर्नुहोस् कुन देशको कति ?
काठमाडौँ, बैशाख २ / आज मंगलबार नेपाली बजारमा बहराईन दिनारसहित केही देशको विनिमयदर बढेको छ । त्यस्तै आज बैशाख दुई गते अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय २१ रुपैयाँ ७४ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय २२ रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको छ।
आज मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २८ रुपैयाँ १३ पैसा तथा बिक्रिदर २८ रुपैयाँ २७ पैसा रहेको छ।
त्यस्तैगरी आज बहराईन दिनार एकको खरिददर ३ सय २२ रुपैयाँ ३६ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय २३ रुपैयाँ ९५ पैसा रहेको छ। भने साउदी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ३८ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ५४ पैसा रहेको छ। आज नेपाली बजारमा यूरोपियन यूरो एकको खरिददर १ सय ३२ रुपैयाँ ९३ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय ३३ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै आज मंगलबार युएई दिराम एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ १४ पैसा छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ ३१ पैसा रहेको छ। भने आज त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १ सय ५१ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रिदर १ सय ५२ पैयाँ ७२ पैसा रहेको छ।
त्यस्तैगरी आज कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ९१ रुपैयाँ ७ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय ९३ रुपैयाँ रहेको छ। भने आज कतारी रियाल एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ ३९ पैसा रहेको छ।
प्रकाशित मिति २ बैशाख २०७७, मंगलवार ०६:३५